★Lux BnB 2BR SkylineViews/Ukucoca ngeVeki/UkuPaka★
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguAshish
Jonga imitsalane edlamkileyo yolu myili wamagumbi amabini okulala eDubai Creek Harbour kwaye ubukele i-Dubai Creek Harbour eyoyikekayo. Indawo yakho yabucala inokukhanya, isicwangciso esivulekileyo esiqaqambileyo sokuhlala, kunye nekhitshi kunye nokufikelela kwi-balcony yabucala. Igumbi lokulala elikhulu libekwe kumgangatho ophakamileyo kakhulu. Zonke iindwendwe ziyakonwabela ukufikelela kwizibonelelo ezimangalisayo kwiiNdawo zokuHlala, kubandakanya ichibi kunye nejimu. Inqaba iya kumisela umgangatho wegolide wokuqamba izinto ezintsha kwizixeko zehlabathi jikelele.
Yonwabela i-147 yeemitha zesikwere se-deluxe, i-cosmopolitan-style yobunewunewu kunye neembono ezothusayo zokuphuma kwelanga okanye ukutshona kwelanga, akukho tyelelo eDubai luya kugqitywa ngaphandle kokonwaba kulo msebenzi wobugcisa. Zingene kubomi beCreek Marina kwaye uhambe ngesikhephe kumava angenakuthelekiswa nanto eCreek Marina Yacht Club phambi kweNdawo zokuHlala.
Umgangatho ukuya kwiifestile zesilingi zivuleleke kwibalcony yakho yabucala ukusuka apho unokonwabela iimbono ezintle zezibuko laseDubai kunye nephuli. Ngaphakathi, ezo festile zihlamba ngokwenene indawo ekukhanyeni kwendalo, okwenza kube luyolo lokwenene ukuchitha ixesha apha. Hlala uphumle okanye wonwatyiswe, enkosi kwiisofa ezitofotofo kakhulu ezibekwe kufutshane netafile yekofu kunye nombono we-49-intshi yesikrini esisicaba sikamabonakude we-LED. Kukho netafile yokutyela enegumbi lokuya kwiindwendwe ezi-6 ukuba zihlangane ukuze zitye, zidlale, nokuba zisebenze.Iibhedi ezimbini ze-sofa cum zilungele abantu abadala ababini abanelinen, imithwalo kunye ne-duvet.
Ikhitshi lakho elidityanisiweyo elineetafile ezigqwesileyo zegranite lidityaniswe kwindawo yokuhlala kwaye lifakelwe umphezulu woluhlu lwezixhobo. Uya kuba nazo zonke izixhobo, i-cookware, iipleyiti, iiglasi kunye ne-cutlery kuya kufuneka ukonwabele iziselo, i-snacks kunye nokutya onqwenela ukuzilungiselela.
Eli gumbi lihonjiswe kakuhle libonakaliswe kweyona migangatho iphezulu kakhulu, kunye nebhedi yobukhulu benkosi enomandlalo okhululekileyo kakhulu kunye nemiqamelo kunye needuvethi ezikumgangatho ophezulu. Kukho i-49-intshi yesikrini esisicaba se-LED kamabonakude kwigumbi, kunye nedesika kunye nesitulo.
Igumbi lokulala elinamawele
Ibhedi yobukhulu beKumkani eneenkwenkwezi ezintlanu ezisemgangathweni yenza eli gumbi lilungele abantwana. Kukho idesika kunye nesitulo apha, kunye nokufikelela kwigumbi lokuhlambela eline-ensuite.
Kukho i-ensuite yosapho kumagumbi okulala omabini, phakathi kwawo abonelela ngeebhafu zokuhlambela, ibhafu kunye neshawari, kunye nesomisi seenwele, kunye nomgangatho ophezulu, iitawuli ezithambileyo zokusetyenziswa kwakho. Ukongeza kwindlu yangasese enye yomgubo kwindawo yokungena.
*I-balcony enkulu yaBucala
* Iimbono ezimangalisayo zeDubai Creek Harbour
* 2 iiTV ze-LED
* Ikhitshi elineenkcukacha eziphezulu
Ukufikelela kuluhlu olubanzi lwezibonelelo zehotele, kubandakanywa:
*	Ipuli yokuqubha
* Inkundla yeSquash
* Indawo yokudlala yabantwana
* Iklabhu yabantwana
• Iqula lokuqubha labantwana
* Indawo yokupaka yasimahla
* Ivenkile yokutya yokuhanjiswa kwasimahla
Nali ithuba lakho lokuba ube namava okuphila ubomi obutofotofo, obunesitayile kwi-Dubai's Creek Harbor. Iimbono oya kuzonwabela ulwandle, imithi yesundu kwaye ziyamangalisa ngokwenene. Kwaye ukuhlala apha kuya kukwenza ube lula ukufikelela kuzo zonke iindawo ezinomtsalane ezidumileyo, kubandakanya:
IDubai Mall- eyona ndawo inkulu yokuthenga eDubai, ineenketho ezingapheliyo zokuthenga, ukutya, iikhefi kunye nomboniso odumileyo womthombo, nje 12mins drive.
Burj Khalifa- esona sakhiwo side ehlabathini sinandipha iimbono ezintle ukusuka phezulu, 15 mins drive.
I-Ras Al Khor Wildlife Sanctuary- Lo mgxobhozo usebenza njengendawo yokuzalela kunye nekhaya le-crustaceans, izilwanyana ezincancisayo kunye neentlanzi, kodwa ziiflamingo eziba umboniso ebusika. Jonga ngokusondeleyo phakathi kwentaphane yeentsiba ezipinki kwaye ungabona iintsiba ezingwevu, ii-egrets ezinkulu, iingqwele, iicormorants, izinti ezinamaphiko amnyama, iisandpipers, i-osprey nokunye.
Kukho izikhumba zeentaka ezintathu ezibekwe kumda wendawo engcwele nezifumaneka simahla ukuze uluntu lukwazi ukufikelela kuzo ngexesha elimisiweyo lokukhanya kwemini. Ezi zikhumba zinyathelo lokuqala kwiprojekthi eqhubekayo yokuphuhlisa indawo ekhuselweyo, i-6 mins drive
IsiXeko soMnyhadala waseDubai- yenye yezona ndawo zidumileyo zabakhenkethi ekufuneka zindwendwelwe ngumntu wonke. Ukusuka kuluhlu olumangalisayo lweemveliso zokuthengisa kunye neevenkile zesebe, ukubonelela ngokuzonwabisa kwabathengi, ukuya kwiindidi ezahlukeneyo.
ukutya kubo bonke abathanda ukutya, 19 mins drive
Iziko loRhwebo- elidume ngemiboniso, i-15 mins drive
Ukusukela ngalo mzuzu ungena, kude kube lixesha lokuphuma kwakho, iqela lakho lomkhosi liya kuba khona ukuze likuxhase kwaye likubonelele ngalo naluphi na uncedo onokulufuna ngexesha lokuhlala kwakho eDubai. Ke, zive ukhululekile ukunxibelelana ngalo naliphi na ixesha ngayo nayiphi na imibuzo onokuba unayo. Iinkcukacha zeqela ziya kwabelwana nawe xa uqinisekisa ukubhukisha kwakho.
Ukusukela ngalo mzuzu ungena, kude kube lixesha lokuphuma kwakho, iqela lakho lomkhosi liya kuba khona ukuze likuxhase kwaye likubonelele ngalo naluphi na uncedo onokulufuna ngexes…
Inombolo yomthetho: DUB-THE-GVK8I
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Dubai